Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Amazon waxay ballan qaadaysaa heshiisyo waa weyn inta lagu jiro Cyber ​​​​Isniinta usbuuca
Calaamadee jadwalkaaga usbuuca dhammaadka ee kaydinta. Amazon ayaa maanta daaha ka qaaday muuqaal qarsoodi ah oo kumanaan heshiisyo ah oo ay macaamiishu wax ka iibsan karaan inta lagu jiro heshiisyada Cyber ​​​​Isniinta usbuuca, kaasoo bilaabmaya Sabtida, Noofambar 27, oo soconaysa Isniinta, Noofambar 29.
Inta lagu jiro dhacdada heshiisyada, macaamiishu waxay dhalin karaan kaydad cajiib ah qayb kasta, iyo sidoo kale qiimo dhimis qoto dheer oo ku saabsan alaabada caanka ah iyo alaabooyinka ay ku jiraan elektiroonigga Samsung iyo LG, guriga iyo jikada lagama maarmaanka ah ee Shark, Vitamix, iyo Cuisinart, waa inay lahaadaan alaabta lagu ciyaaro laga bilaabo Hasbro, LEGO, iyo Crayola, quruxda ugu cadcad Revlon, moodooyinka ugu sarreeya ee Ray-Ban, oo dooro aaladaha karti u leh Alexa sida Amazon Fire TV 50" 4-Series. Dhammaan usbuuca dhammaadka wiigga, macaamiishu waxay sidoo kale ka iibsan karaan kumanyaal heshiisyo la yaab leh oo ka yimid shuraakada wax iibinta ee madaxbannaan, kuwaas oo intooda badan ah ganacsiyo yaryar iyo kuwo dhexdhexaad ah, oo ay ku jiraan heshiisyada haweenka ay leeyihiin, kuwa madow, iyo meheradaha ay leeyihiin qoyska milatariga.
Macaamiisha u baahan wax yar oo dheeraad ah oo ku saabsan waxa ay u hadiyadeeyaan kuwa ay jecel yihiin sanadkan, Amazon ayaa ku daboolay. Dhammaan inta lagu guda jiro xilli-xilliga macaamiishu waxay sii wadi karaan inay wax ka iibsadaan oo ay ogaadaan alaabta Amazon ee xulashada ugu weyn ee hagayaasha hadiyadaha weli - oo ay ku jiraan Liiska Fasaxyada Fasaxa ee caanka ah iyo liiska Waxyaabaha la jecel yahay ee Oprah, iyo sidoo kale hagaha hadiyadaha loogu jecel yahay macaamiisha iyo xulashada hadiyadaha khubarada. Hagaha hadiyadda, kaas oo ka muuqda xulashooyin heer sare ah oo laga soo doorto liiska caanka ah sida Jessica Alba, Jojo Siwa, billad dahab ah Suni Lee iyo duo influencer Aint Afraid, iyo xarumaha warbaahinta oo ay ku jiraan BuzzFeed iyo Refinery29, iyo kuwo kale.
Maalinta Isniinta ee Cyber, Amazon Live waxay qaban doontaa munaasabado kala duwan oo toos ah oo soo bandhigaya xulasho la soo xulay oo ah heshiisyada ugu wanaagsan, bandhigyo wax soo saar, isku dayo isku day ah, iyo sheekeysi toos ah oo ay marti galiyaan dadka caanka ah iyo saameeyayaasha, oo ay ku jiraan supermodel iyo ganacsade Miranda Kerr, heesaa waddan ah iyo gabayaa Jessie James Decker, iyo saamaynta moodada Aimee Song. Daawadeyaashu waxay si fudud uga gadan karaan badeecooyinka iyo summadaha sifaysan iyagoo isticmaalaya carousel-ka oo cusbooneysiiya wakhtiga dhabta ah.
Hoos waxaa ku yaal muunada heshiisyada ugu sarreeya iyo alaabooyinka oo la heli doono taariikho iyo waqtiyo kala duwan inta u dhaxaysa Sabtida, Noofembar 27, iyo Isniinta, Noofambar 29, iyadoo sahaydu dhammaanayso. Macaamiishu waxay wax ka iibsan karaan heshiisyada Cyber ​​Monday app-ka wax iibsiga ee Amazon, ama way waydiin karaan, "Alexa, waa maxay heshiisyadaydu?" Xulo heshiisyada Cyber ​​​​Monday sidoo kale waxaa laga heli karaa dhammaan dukaanka 4-xiddig ee Amazon iyo goobaha dukaanka buugaagta Amazon. Xubnaha Prime waxay sidoo kale ku raaxaysan karaan 30 daqiiqo oo ah helitaanka hore ee heshiisyada hillaaca ugu kulul ee Amazon inta lagu jiro xilliga fasaxa, iyo maalin kasta.
Alaabta iyo Ciyaaraha: Ku badbaadi ilaa 30% ee xulashada dhismaha, oo ay ku jiraan LEGO iyo Playmobil. Ku badbaadi ilaa 30% ciyaaraha Hasbro. Ku badbaadi ilaa 30% alaabta fanka iyo farshaxanka ee Crayola iyo noocyada kale. Ku badbaadi ilaa 30% ciyaaraha looxa xulashada oo ay ku jiraan Catan iyo Tigidhka Raacida. Ku badbaadi ilaa 30% xirmooyinka waxbarashada iyo ciyaaraha Osmo. Ku badbaadi ilaa 30% Khayraadka Waxbarashada iyo Aragtida Waxbarasho ee barashada ciyaaraha
Dharka xilliyeedka: Badbaadin ilaa 40% doorasha Orolay down jaakadaha iyo jardiinooyinka.U badbaadi ilaa 30% xulashada Crocs. Ku keydi ilaa 30% xulashada Run & Co. rajabeetada iyo nigisyada. Ku badbaadi ilaa 30% muraayadaha muraayadaha ee Ray-Ban. Ku keydi ilaa 20% xulashada dharka dibadda ee Calvin Klein, Tommy Hilfiger, DKNY, iyo in ka badan. Ku badbaadi ilaa 25% funaanadda gaarka ah ee laguugu sameeyay Ku badbaadi ilaa 25% xulashada qaababka firfircoonida iyo qolka fadhiga ee Shopbop, oo ay ku jiraan Honeyew Intimates, Supply Z, iyo Alala.
Guriga iyo Jikada: Ku keydi ilaa 35% xulashada qalabka dheriga degdega ah, oo ka dooro mashiinada cuntada lagu kariyo iyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah All-Clad, Ninja, Vitamix, Calphalon, Cuisinart, iyo SodaStream. Badbaadiya ilaa 31% ee dooro faakuumamka iRobot Roomba, ka dooro hawada sifeeya Blue Air iyo Coway, iyo mishiinada tolida ee Brother and Singer. Ku badbaadi ilaa 30% alaabta guriga ee la doortay.
Awoodda: Ku keydi ilaa 33% TV-yada laga xusho Samsung, Sony, iyo LG Ku keydi taleefoonnada gacanta ee laga xusho Bose, Sony, iyo JBL. Ku badbaadi ilaa 30% xulashada kormeerayaasha HP, Laptop-yada, iyo dhammaan-ku-hal-midabyada. Ku keydi ilaa 34% xulashada sawirada dhijitaalka ah ee Nixplay Ku keydi $20 xulashada kontaroolayaasha Nintendo Switch Pro. Ku keydi 25% MYNT3D Qalinka 3D Daabacaadda Xirfadlayaasha ah.
Quruxda iyo Daryeelka Qofka: Ku badbaadi ilaa 50% cadayga korantada ee xulashada Oral-B iyo Philips Sonicare. Ku badbaadi ilaa 39% xiirashada korantada, garka, iyo daabka Braun, Gillette, iyo in ka badan. Ku badbaadi ilaa 30% daryeelka timaha Revlon, Head Bed, iyo noocyada kale. Ku keydi ilaa 52% 23andMe Qalabka Tijaabada DNA ee Adeegga Hiddaha.
Noocyada Amazon: Ku badbaadi ilaa 30% alaabta jikada ee Aasaasiga ah ee Amazon. Ilaa 30% ka badbaadi dharka carruurta iyo dhallaanka ee Noocyadayada. Ku badbaadi ilaa 30% kafeega Noocyadayada.
Aaladaha Amazon: Ku keydi ilaa 47% Echo Show 5. Ku badbaadi ilaa 45% Amazon Halo Band tracker jir dhiska. Ku keydi ilaa 40% Kindle iyo ilaa 28% Kindle Paperwhite Kids. Ku badbaadi ilaa 40% kiniiniga Fire HD 10 Kids Pro. Ku badbaadi ilaa 36% Dabka TV Stick 4k Max. Ku badbaadi ilaa 30% Amazon Fire TV 50" 4-Series.
Hagaajinta Guriga, Qalabka, iyo Beerta: Ku keydi ilaa 30% dooro aaladaha MADOW+DECKER. Ku keydi aaladaha laga xusho DEWALT, GEARWRENCH, iyo SKIL. Ku keydi 25% qufullada smart ee Level Home. Ku badbaadi ilaa 40% meelaha meelaha lagu ciyaaro iyo barkadaha laga xusho Bestway iyo in ka badan.
Ilmo: Ku keydi xulashada waxyaabaha muhiimka ah ee ilmaha ee Philips Avent. Badbaadso xulashada alaabta quudinta ee Dr. Brown's sida dhalooyinka iyo mujurucyada. Badbaadin dooro Cybex gb Pockit strollers. Ku badbaadi ilaa 30% kuraasta baabuurta ee Britax. Ku keydi 25% doorashada Badbaadada 1st Kor oo tag kuraasta baabuurka. Intaa waxaa dheer, kaydi alaabta aad dooratay ee Joovy xilli fasaxan.
Xayawaanka: Ku badbaadi 30% hadiyadaha iyo saadka xayawaanka ee la xusho, oo ay ku jiraan alaabta lagu ciyaaro, daawaynta, sariiraha, iyo sanduuqyada. Badbaadin ilaa 25% ee xulashada alaabta daryeelka xayawaanka ee Bissell. Ku badbaadi 20% Petmate Husky Dog House eeyaha ilaa 90 rodol. Hel muunad bilaash ah oo ah alaabada dheeriga ah ee Greenies, iyadoo sahaydu ay dhammaanayso.
Ciyaaraha iyo Banaanka: Ku badbaadi ilaa 30% doorashada dhalooyinka biyaha ee Nalgene Sustain. Badbaadin ilaa 30% dooro alaabada Xooga Platinum ee Weider. Ku badbaadi ilaa 30% dhalooyinka iyo agabka CamelBak ee dooro. Ku keydi ilaa 30% xulashada mootooyinka korantada, mashiinnada baaskiilka, iyo istaaga Segway, Hover-1, iyo in ka badan.
Madadaalo: Keydso ilaa 50% dooro Prime Video filimada la kiraysto ama la iibsado, laga bilaabo bandhigyo cusub ilaa kuwa heersare ah, oo lagu daray bandhigyada TV-ga garaacday, waxyaabaha xilliyeedka, iyo in ka badan. Waxaa dheer, macaamiisha cusubi waxay helayaan 50% dhimis xilli ciyaareedkan NBA League Pass iyo rukunka Kooxda Gudbinta NBA ka dib tijaabo bilaash ah oo todoba maalmood ah. Ku keydi Amazon Music Unlimited, bilaash ah seddex bilood macaamiisha cusub, ama bilaash lix bilood iibsashada qalabka Amazon Echo ee xulashada. Intaa waxaa dheer, macaamiishu waxay ku dhageysan karaan podcasts-yada ay jecel yihiin ee Wondery iyagoo 40% ka dhimay rukunka halka sano ah ee Wondery+. Ku keydi ilaa 59% xubinnimada sanadlaha cusub si aad IMDbPro. Akhristayaashu waxay kaydin karaan ilaa 80%. eBook-yada caanka ah, ilaa 50% marka la xusho Kindle cinwaanno gaar ah, iyo ilaa 30%. Gawaarida Waqtiga sets sanduuq.
Socdaalka Virtual iyo Khibrada: Kuwa liiskaaga ku jira ee haysta wax walba ama khibrad doonka ah, u badbaadi ilaa 50% dhammaan khibradaha Amazon Explore, oo ay marti galiyeen khabiiro maxalli ah. Macaamiisha Maraykanku waxay marin u heli karaan khibrado kala duwan oo toos ah oo toos ah, khibrad is dhexgal ah oo aduunka oo dhan ah - dhamaantood waxay ka yimaadaan raaxada guryahooda. Macaamiisha waxay soo iibsan karaan alaab gaar ah, waxay baran karaan sida ciidaha looga xuso aduunka oo dhan, iyo khibradaha hadiyadeed ee saaxiibadooda iyo qoyskooda.
Dukaan oo taageer ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah
Amazon waxay martigelisaa in ka badan 500,000 oo ah la-hawlgalayaasha iibinta madax-bannaan ee Mareykanka, kuwaas oo intooda badan ah ganacsiyo yaryar iyo kuwo dhexdhexaad ah, bakhaarkeeda waxayna ka caawisaa inay gaaraan boqolaal milyan oo macaamiil ah adduunka oo dhan, kordhiyaan iibkooda, oo abuuraan shaqooyin - oo ay ku jiraan qiyaastii 1.8 milyan US- Shaqooyin ku saleysan 2020. Macaamiishu waxay taageeri karaan ganacsiyadan yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxayna ku badbaadin karaan hadiyadaha iyagoo iibsanaya Ganacsiga Yaryar, Amazon Handmade iyo Amazon Hagaha hadiyadaha Launchpad.